ဗီတာမင် ဘီ ၆ | Moe Naymin
ဗီတာမင် ဘီ ၆
ဗီတာမင် ဘီ ၆ ကို pyridoxine လည်း ကောင်းသည်။ Adrenal Gland ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကူညီပေးပြီး ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောများ၊ အစာချေလုပ်ငန်းများ၊ ဇီဝကမ္မဖြစ်စေရန် ကူညီထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကဆီဓါတ်၊ အဆီဓါတ်နှင့် အသားဓါတ်များ ဖြိုခွဲရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။
ဗီတာမင် ဘီ ၆ ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ
သွေးနီဥဆဲလ်များတွင်ရှိသော Hemoglobin သည် ခန္ဓာကိုယ်တွင် အောက်ဆီဂျင်ဓါတ် သယ်ဆောင်ရာတွင် အဓိကကျသည်။
heme သည် hemoglobin ၏ အဓိက ကျသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ဗီတာမင် ဘီ ၆ လိုအပ်ပါသည်။
ဗီတာမင် ဘီ ၆သည် ကဆီဓါတ် ချေဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွင် ပါဝင်ပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များကို သုတေသီများက ကြွက်များနဲ့ စမ်းသက်ခဲ့ရာမှာ အထင်အရှားတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်၏ စွမ်းအင်များကို ကဆီဓါတ်ဖြိုခွဲခြင်းမှာ ရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗီတာမင် ဘီ ၆ သည် သွယ်ဝိုက်၍ ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအင်အတွက် အရေးပါ ပါသည်။
၃။ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောများ ကျန်းမာရေး
ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောများအချင်းချင်း ဆက်စပ်မှုကို ပြုလုပ်ပေးသော Neurotransmitters များ ထုတ်လုပ်ရာတွင် ဗီတာမင် ဘီ ၆ လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ ပြောရရင် ဗီတာမင်ဘီ ၆ အားနည်းခြင်းကြောင့် အတက်ရောဂါဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်းသည် အလွန်ရှားပါးပါသည်။ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းသည် အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ဗီတာမင် ဘီ ၆ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် လုံလောက်မှုမရှိလျှင် စိတ်ဓါတ်ပိုမိုကျစေခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ဂျပန်သုတေသီများက ပြောပါသည်။ မကြာသေးမီက လေ့လာချက်များအရာ ဗီတာမင် ဘီ ၆ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် ချို့တဲ့နေလျှင် ခန္ဓာကိုယ်တွင် အာရုံ စူးစိုက်မှု အားနည်းခြင်း၊ လျော့နည်းခြင်းများ ဖြစ်သည်။
၄။ အသံမှ အဆိတ်များ စွန့်ထုတ်ခြင်း
အားလုံးသိကျတဲ့အတိုင်း ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အသံနှင့် ကျောက်ကပ်သည် လူကိုယ်ခန္ဓာရှိ အဆိပ်အတောက်များကို ချေဖြတ်ပေးပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရာင်္တင် အဆင့် နှစ်ဆင့်ရှိပါသည်။ ဤအဆင့်များ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဗီတာမင် ဘီ ၆ သည် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါရှိပါသည်။
နာတာရှည်ရောင်ယမ်းခြင်းရောဂါများသည် ဗီတာမင် ဘီ ၆ နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိပါသည်။ တိရစ္ဆာန်များတွင် လေ့လာချက်အရ ခန္ဓာကိုယ်၏ ခုခံအားတွင်လည်း ဗီတာမင် ဘီ ၆ ပါဝင်နေပါသည်။ ဗီတာမင် ဘီ ၆ သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အသားဓါတ် ချေဖြတ်ခြင်းအတွက် အရေးပါးပါသည်။ WHFood ၏ အကောင်းဆုံးအစားအစာ မှတ်တမ်းအများစုတွင် ဗီတာမင် ဘီ ၆ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင် ဗီတာမင် ဘီ ၆ ထုတ်လုပ်မှု Neurotransmitter ထုတ်လုပ်ရာတွင် ကူညီပေးခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောပျက်စီးခြင်းမှ ကူညီပေးခြင်း၊ အစာချေခြင်း နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အစာအဟာရများ အလွယ်တကူစုပ်ယူမှုကို ကူညီပေးပါသည်။ ထို့အပြင် ရာသီမလာခင်ဖြစ်တတ်သော ကိုက်ခဲခြင်းများ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းနှင့် အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခြင်း အချို့အတွက် အသုံးဝင်ပါသည်။ ဗီတာမင် ၆ ကို ဖောလစ်အက်ဆစ်၊ ဗီတာမင် ဘီ ၁၂ တို့နှင့်တကွ သုံးလေ့ရှိပါသည်။
သွေးအားနည်းရောဂါ ( sideroblastic anaemia) ဗီတာမင် ဘီ ၆ လျော့နည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သော အတက်ရောဂါ၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ သွေးထဲတွင် homocysteine ပမာဏများနေလျှင် ဗီတာမင် ဘီ ၆ ကို ဖောလစ်အက်ဆစ်နှင့် တွဲ၍ ဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းသောရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ ADHG ဆီးကျောက်တည်ခြင်း၊ ၀က်ခြံ၊ သွေးကြောအဆီဖုံးခြင်း နှင့် အဆုတ်ကင်ဆာတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဗီတာမင် ဘီ ၆ လျော့နည်းသော လက္ခဏာများ
ခြေဖ၀ါး၊ လက်ဖ၀ါးရှိ အာရုံကြောများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အရက်အလွန်အမင်းသောက်သုံးသူများ၊ အသဲခြောက်ရောဂါရှင်များ၊ သားရိုက် ရောဂါရှိသူများ၊ နှလုံးရောဂါရှင်များသည် ဗီတာမင် ဘီ ၆ အားနည်းနိုင်ပါသည်။
ဗီတာမင် ဘီ ၆ အားနည်းလျှင် ကြုံတွေ့ရသော ရောဂါများမှာ - အရည်ပြားရောင်ခြင်း၊ နှုတ်ခမ်းကွဲခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ လျှာနှင့်ပါးစပ်ရောင်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းနှင့် ညဘက်အိပ်မပျော်ခြင်း၊ သန္ဓေတားဆေး OCP နေ့စဉ်သောက်နေသော အမျိုးသမီးများတွင်လည်း ဗီတာမင် ဘီ ၆ လျော့နည်းခြင်းများ ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်။ စတီးဝိုက်ဆေးများ၊ ပဋိဇီဝဆေးများ၊ ပါကင်ဆန်ရောဂါများတွင် အသုံးပြုနေသော ဆေးများသည် ဗီတာမင် ဘီ ၆ ကြောင့် levodopa စုပ်ယူမှုကို လျော့နည်းစေသည်။ ပုံမှန် မည်သည့်ရောဂါမျှမရှိသော လူတစ်ယောက်သည် အသက် ၆၀ လောက်တွင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် ဗီတာမင် ဘီ ၆ လျော့နည်းသွားတတ်သည်။
ဗီတာမင် ဘီ ၆ ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ
ငါး၊ အမဲသား၊ အသဲနှင့် ၀မ်းတွင်းကလီစာအမျိုးမျိုး၊ အာလူး၊ ပဲအမျိးမျိုး၊ အချဉ်ဓါတ်မပါသော အသီးများ၊ စေးကပ်သော အရွက်များ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ဗီတာမင် ဘီ ၆ ကို တစ်နေ့ ၁၀၀ မီလီဂရမ် လောက်သာ သုံးစွဲသင့်ပါသည်။ ဗီတာမင် ဘီ ၆ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် အလွန်အကျွံရှိပါက ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အာရုံများပျက်စီးခြင်း၊ ခြေ လက် ထုံကျင်ကိုက်ခဲခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။
ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အချို့နေရာများ ထုံကျင်လာလျှင် ဗီတာမင် ဘီ ၆ သောက်သုံးနေခြင်းကို ရပ်သင့်ပါသည်။ ထို့အပြင် နေပူထဲသွားလျှင် အသားအရေ ယား၍ ရောင်လာခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ထုံခြင်း ဖြစ်စေပါသည်။ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း စသည့်များလည်း ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။
Aniodarome (cordarone) နှင့်တွဲသောက်လျှင်၊ နေပူထဲသွားလျှင် အရေပြား ဓါတ်မတည့်မှု ပိုးဆိုးတတ်ပါသည်။ Phenytoin (အတတ်ရောဂါ ဆေးကို ဗီတာမင် ဘီ ၆ နှင့် တွဲသောက်လျှင် ထိုဆေး၏ အာနိသင် လျော့ကျပါသည်။ အတတ်ရောဂါတွင် အသုံးပြုသော လီပိုဒိုဘာကို ဗီတာမင် ဘီ ၆ နှင့် တွဲသောက်လျှင် အတတ်ရောဂါကို လျော့ကျစေပါသည်။ Wilson ရောဂါရှင်မျာ၊ ခဲဓါတ်သင့်နေသူများ၊ ဆီးကျောက်တည်သူများ၊ အဆစ်အမြစ်ရောဂါ ရောင်ယမ်းသူများသည် ဗီတာမင် ဘီ ၆ ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်သုံးသင့်ပါသည်။
Vitamin B6, also called pyridoxine, isawater-soluble nutrient that is part of the B vitamin family. B vitamins, including vitamin B6, help support adrenal function, help calm and maintainahealthy nervous system, and are necessary for key metabolic processes. Vitamin B6 acts asacoenzyme in the breakdown and utilization of carbohydrates, fats and proteins.
Hemoglobin is complicated protein present in red blood cells, and one of its primary roles is to help carry oxygen around the body. Heme isakey section of the hemoglobin molecule and the initial production of heme in bodies requires the presence of vitamin B6. (Although heme production can occur in multiple places throughout the body, the primary places involve the liver and bone marrow.)
However, we may be at risk of other more common problems that can be brain and nervous-system related if our B6 intake is poor. Depression isagood example in this area. Researchers in Japan have found that the risk of depressed mood is higher in people with lower levels of vitamin B6 in their diet (in comparision with the general population).
Generally speaking, we remove unwanted chemicals from our blood in the liver and kidney, and this process involves two steps. The first of these two steps is to make the chemicals more water soluble to allow for the second step of binding and removal. The number of nutrients required for this first step is long, but vitamin B6 is clearly one of the most important.
Other Health Support Roles
Chronic inflammatory conditions also appears to be associated with depletion of vitamin B6.
In animal studies, B6 has been shown to playarole in the development of healthy immune system function. B6apotentially important vitamin for support of general amino acid and protein-related metabolism. Interestingly, many of our WHFoods that rank as excellent or very good sources of protein also rank as excellent or very good sources of B6.
Vitamin B6 helps in the production of neurotransmitters, the chemicals that allow brain and nerve cells to communicate with one another, ensuring that metabolic processes such as fat and protein metabolism run smoothly, and is important for immune system function in older individuals. It can also help addressanumber of conditions, including nerve compression injuries (like carpal tunnel syndrome), premenstrual syndrome (PMS), and some cases of depression and arthritis. Vitamin B6 is often used to treat high homocysteine levels along with folic acid and vitamin B12.
Anemia (sideroblastic anemia). Certain seizures in infants (pyridoxine-dependent seizures). Administering pyridoxine intravenously (by IV) controls seizures in infants that are caused by pyridoxine dependence. High homocysteine blood levels. Taking pyridoxine by mouth alone or together with folic acid is effective for treating high homocysteine levels in the blood. Memory loss, diabetes, asthma attacks, attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD), kidney stones, lung cancer, acne and atherosclerosis may also be treated and improved via vitamin B6 supplementation.
Vitamin B6 deficiency can lead to nerve damage in the hands and feet. Cervical dysplasia has been linked toalow intake of several B vitamins including pyridoxine, and people with alcoholism, cirrhosis, hyperthyroidism and congestive heart failure may experience deficiencies more often. Some symptoms ofavitamin B6 deficiency include dermatitis, cracked and sore lips, inflamed tongue and mouth, confusion, depression and insomnia. Women who take oral contraceptive pills (OCP) have an increased risk of vitamin B6 deficiency. Steroids, antibiotics, and drugs used to treat Parkinson's disease. Vitamin B6 can reduce the effectiveness of levodopa therapy, which is used to treat Parkinson's disease.Even ataconsistent dietary intake, people over the age of 65 years show lower blood levels of vitamin B6.
The richest sources of vitamin B6 include fish, beef liver and other organ meats, potatoes and other starchy vegetables, and fruit (other than citrus).
Risks associated with too much vitamin B6
The current recommended maximum daily intake is 100 mg. High doses of vitamin B6 can, over time, be toxic, and may result in nerve damage or numbness and tingling in the extremities that may eventually be irreversible. You should discontinue use of supplemental B6 if any unusual numbness develops in the body. Too much B6 can also cause oversensitivity to sunlight, which can lead to skin rashes and numbness, as well as nausea, vomiting, abdominal pain, loss of appetite, and increased liver function test results.
Amiodarone (Cordarone) might increase your sensitivity to sunlight. Taking pyridoxine (vitamin B6) and taking phenytoin (Dilantin) might decrease the effectiveness of phenytoin (Dilantin) and increase the possibility of seizures. Do not take large doses of pyridoxine (vitamin B6) if you are taking phenytoin (Dilantin).
People taking penicillamine, used to treat Wilson's disease, lead poisoning, kidney stones and arthritis, should take vitamin B6 only underaphysician's direct supervision. Estrogenic herbs and supplements, including birth control pills, may interact with vitamin B6.